Khilaaf xooggan oo ka dhex qarxay xisbiga Kulmiye ee Maamulka Somaliland
Muuse Biixi “Somaliland waa is difaaceysaa, kuwa ka soo hanjabaya Xamar iyo Garowe…”
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan haddii la soo weeraro, isagoo ku eedeeyay Puntland inay colaad ka hurineyso Gobolka Sool.
Ciidamada Somali-land oo Xabsi dhigay Gabar ku caan baxday Suugaan iyo Soomaalinnimo
Sagal Radio Services • News Report • January 31, 2018
Ciidamada sirdoonka Somal-iland ayaa xabsiga u taxaabay gabar ku caan baxday suugaanta iyo Soomaalinimada oo Muqdisho ku sugneyd muddooyinkii ugu danbeeyay.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo la kulmay Michael Keating (Sawiro)
Ergeyga Xoghayaha Guud ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa maanta kula kulmay magaalada HargeysaMadaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Somaliland oo ka soo horjeesatey ku wareejinta dowlada Soomaaliya maamulka Hawada
Maamulka Somaliland ayaa war ka soo saaray wareejintii dowladda Soomaaliya lagu wareejiyay Maamulka Hawada Soomaaliya,iyadoo maanta si rasmi ah xariga looga jaray xarunta laga maamulayo hawada Soomaaliya.
Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya oo la kulmay Madaxweynaha cusub ee Somaliland
Safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya David Concar ayaa noqday diblomaasigii u horeeyay ee reer galbeedka ka socda oo booqda magaalada Hargeysa, kaddib doorashadii dhowaan ka dhacday ee uu ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi.
Daawo: Musharax C/raxmaan Cirro oo qaadacay doorashadii Somaliland
Sagal Radio Services • News Report/Video • November 20, 2017
Musharax Xisbiga Waddani ee Somaliland C/raxmaan Cirro ayaa caawa ku dhawaaqay inuu qaadacay doorashadii Madaxtooyada ee dhacday 13-kii bishan, isagoo caddeeyay inay dhacday musuq maasuq iyo ku shubasho.
Guddiga Doorashada Soomaaliland oo diiday in ku shubasho dhacday
Sagal Radio Services • News Report • November 17, 2017
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya doorashadii Isniintii ka dhacday Soomaaliland in xisbi gaar ah ku shubtay.